Washington Post oo Warbixin ka Qortay Gabadhii u Oroday Soomaaliya Ciyaaraha Olimbikada
London (Gubta.com) Inkastoo orodyahanada Soomaaliya Maryan Nuux Muuse ay kaalinta ugu danbeysa ka soo gashay tartankii orodka 400 mitir ee hablaha Olimbikada Dunida hadana waxa ay dhiirogelin ka heshay Soomaali iyo dadyow kale oo badan.
Wargeyska caanka ah ee ka soo baxda dalka Mareykanka ee Washington Post ayaa warbixin ay ka qortay orodyahanada Soomaliya waxa ay cinwaan ugaga dhigeen: “Orodyahanad Olimbikada ah oo ku dhameysatay in ka hooseysa inta ay ku dhameystaan gabdhaha dugsiyada sarre balse waxa ay weli tahay dhiirogeliso.
Warbixinta Washington Post ayaa sidoo kale lagu yiri: “Orodyanada caalamiga ah ma ahan inay amaan ku helaan kaliya dadaalkooda. Laakiin orodyahanada Somalia Maryan Nuh Muuse waa in texgelin gaar ah la siiyo.
Subaxninadii sabtida, ma aysan la tartami karin sideedii hablood kale ee “heat”keeda wareega 1aad ee tartanka 400 mitir ee hablaha. Si aad ah ayay uga danbeysay asaageeda, xitaa kuma aysan jirin shaashada tabinta NBC. Waqtigii ay ku dhameysatay – 1:10:14 ilbiriqsi – xitaa kuma aysan soo baxdeen tartanka orodka gabdhaha dugsiyada sarre ee Maryland ee dalka Mareykanka.
“Waxa ay ku dhameysatay kaalinta 57aad ee 57 gabdhood oo wareegii 1aad ee tartanka 400 mitir ka qeyb galay, sidaasi oo ay tahay waxaa weli loogu yeeraa inay tahay ‘dhiirogeliso’. Sababtoo ah waa ay tahay.” Ayaa lagu qoray Wargeyska Washington Post .
Washington Post ayaa soo qaadatay in Maryan aysan helin tababar ku filan islamarkaana ay si geesinimo leh u matashay dalkeeda inkastoo ay dhibtooyin ka jiraan Soomaaliya. Waxa ay kaloo soo qateen in xitaa garoonkii ay tababarka ku qaadatay inuusan laheyn agabka tababar ee loo baahan yahay, taas bedelkeedana in ciyaartoyda Mareykanka ay helaan tababar dhameystiran maalmaha ugu horeeya ee dugsiyadooda.
Maryan Muuse ayaana amaan badan iyo mahadcelin ka heshay dadka Soomaliyeed iy weliba dadyow kale, iyagoo ku amaanay sida ay dhiirgelin ugu sameysay dad badan oo sideeda oo kale ah oo ka soo baxay xaalad adag islamarkaana soo istaagay masraxa ugu weyn ee Olimbikada Adduunka, waxaa sidoo kale jiray dad badan oo iyana dhaliil usoo jeedinayay kana xumaa guul daradeeda.